परेवाश्वरी दुग्ध उत्पादक सहकारीको २४ औ साधारणसभा – Saurahaonline.com
परेवाश्वरी दुग्ध उत्पादक सहकारीको २४ औ साधारणसभा
चितवन : राप्ती नगरपालिका २ गड्यौलीमा रहेको परेवाश्वरी दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्थाको २४ औ साधारणसभा सम्पन्न भएको छ । शनिबार एक समारोहका बीच सम्पन्न सधारणसभामा राप्ती नगरपालिकाका प्रमुख प्रभा बराल प्रमुख अतिथि रहेकी थिइन् ।
उनले सहकारीको स्थापनापछि ब्यवसायिक किसानहरु बढेको बताउदै आधुनिक पशुपालनलाई प्रोत्साहन गरेको बताइन् । उनले नगरपालिकाले पशु लगायत अन्य कृषिको क्षेत्रमा नगरपालिकाले दिने अनुदानको कार्यक्रममा वास्तविक कृषकहरु सहभागी हुनुपर्ने बताइन् ।
दुधमा मुल्य नपाएको किसानको गुनासो आउने गरेको बताउदै उनले सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरि उचित मुल्य निर्धारण गरिने बताइन् । उनले राप्तीमा प्रदेश सरकारको लगानीमा दुग्ध प्रशोधन केन्द्र निर्माण हुने बताउदै किसानको श्रमको मुल्य स्थानीयस्तरमै पाइने बताइन् ।
कार्यक्रममा राप्ती नगरपालिका वडा नं. २ का अध्यक्ष श्यामसुन्दर उप्रेती, लोथर उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष मान बहादुर स्याङबो, पिप्ले खानेपानी उपभोक्ता संस्थाका अध्यक्ष राजकुमार भट्ट लगायतले बोलेका थिए । त्यस्तै सानाकिसान सहकारी सस्था पिप्लेका अध्यक्ष भक्त ब. घिसिङ, बुद्ध शान्ती बहुमुखी क्याम्पस अध्यक्ष श्यामकृस्ण आचार्य, समाजसेवीहरु नबराज पाठक श्याम, कृष्ण पन्त, रामजी कंडेल, राम ब. लामिछाने, गोपाल प्रसाद डल्लाकोटी लगायत स्थानीय संघ संस्थाका प्रतिनिधिहरु सहभागी थिए ।
कार्यक्रममा संस्थाका अध्यक्ष रामेश्वरसिहं वलीले प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए । त्यस्तै ब्यवस्थापक राम बहादुर खड्काले आनुमानित आयव्यय विवरण तथा संस्थाको भावी निति तथा कार्यक्रम र लेखा संयोजक शिवकान्त वलीले लेखा प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए । कार्यक्रम संस्थाका अध्यक्ष रामेश्वरसिहं ओलीको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको थियो । २०४७ सालमा स्थापना भएको संस्थामा हाल १ हजार ३ सय ३१ शेयर सदस्य रहेका छन । संस्थाको चुक्ता शेयर पुजीँ ४६ लाख ८७ हजार ३ सय रहेको छ भने कुल पुवीँ १ करोड २८ लाख ५२ हजार ६ सय २६ रहेको छ ।